ပြည်သူ့ဆန္ဒဂျာနယ်ရဲ့ သောက်တလွဲလုပ်ရပ် | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
ပြည်သူ့ဆန္ဒဂျာနယ်က အယ်ဒီတာရဲခေါင်မဲမောင်ခေါ် ဦးနေမျိုးအေး နဲ့ ဒီနေ့ ဖုန်းပြောဖြစ်ပါတယ်။
– ဦးက အရင်ကကျောင်းအုပ်ကြီး။ စည်းမျဉ်းကို မချိုးဖောက်ဘူး။ စိတ်ချ။
( ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်တာနဲ့ ဒီကိစ္စနဲ့လုံးဝမဆိုင်)
ဂျာနယ်မှာရှင်းပြမယ် ဆိုတာက ဟုတ်ပါပြီ။ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က Page မှာရော ဘာမှ မဖြေရှင်းတော့ဘူးလားလို့မေးတော့ ..
– ဖေ့ဘွတ်ဆိုတာ မင်းသိတဲ့အတိုင်း ဘာမှမစဉ်းစားဘဲ ပြောချင်ရာပြော ရေးချင်ရာ ရေးနေကြတာ။ လိုင်းပေါ်က ကိစ္စကို စိတ်မ၀င်စားဘူး
( သူယူသုံးသွားတာ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်က ကဗျာဆိုတာကို မေ့နေသလားမသိ)
နောက်ထွက်မယ့်ဂျာနယ်မှာ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမှာလဲ ? ဟိန်းနာမည်အမှန်နဲ့ ကဗျာပြန်ထည့်ရုံနဲ့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဦးတို့ ဘယ်နည်းဘယ်ပုံမှားယွင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကို အတိအလင်းတောင်းပန် ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါသလား လို့ ကျွန်တော်မေးတော့ ..
– ဦးတို့မမှားပါဘူး။ မှားတယ်လို့မပြောပါနဲ့။ ဦးတို့တွေ့တာ ရှဲထားတဲ့ကဗျာကိုပဲတွေ့တာ။ ထပ်ကြည့်တော့လည်း အဆင့်ဆင့်ရှဲထားတာကိုပဲတွေ့တာ။ ဒါနဲ့ ဦးတင်လတ် ရဲ့နာမည်ကိုပဲ ဖော်ပြပြီး ခေါင်းစဉ်မပါလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်တာ။
(ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့ကဗျာဆိုတာ မရှာတတ်လောက်အောင် ဖေ့ဘွတ်ကိုမသုံးတတ်ဘူးလား။ အဲ့လောက်တုံးသလား။ တော်ရုံတန်ရုံလူတစ်ယောက်ကို မေးလိုက်ရင်တောင် မူရင်းလင်ခ့်ကို ရနိုင်ဖို့မခက်တဲ့အခြေအနေ )
– ပြီးတော့ ဦးတို့က မဂ္ဂဇင်းမဟုတ်ဘူး။ ဂျာနယ်ဆိုတော့ အမြန်လုပ်ရတာ။ ဒီကဗျာလေး သိပ်ကောင်းတော့ ပြည်သူတွေကို ပြချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ကဗျာဆရာကို မရှာဖြစ်တော့တာ။ ဖော်ပြလိုက်ရင် ကဗျာဆရာက ဘယ်သူဆိုတာပေါ်လာမှာပဲ။ ဒီတော့မှ ချီးမြှင့်လိုက်မယ်လို့ အစီအစဉ်ရှိပြီးသား ။
( မူရင်းရေးသူကို မရှာနိုင်သေးတော့ရော ဒီကဗျာမဖော်ပြနဲ့ပေါ့။ စုံစမ်းပြီး အသိပေးပြီးမှ ခွင့်ပြုချက်ရလို့ထည့်ရင် ဒီပြဿနာပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိ။ ဒီကဗျာကို ဖော်ပြရမှ သူတို့ဂျာနယ်ထုတ်လို့ရမှာလား။ စာမျက်နှာပြည့်မှာလား )
– ဒီကဗျာလေးကို စာမျက်နှာပေါ်တင်ပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ …
( ဟိန်းသာ ဆန္ဒရှိရင် ဒီကဗျာ ပရင့်တက်မီဒီယာဘက်မှာ ပါတာ ကြာနေပြီ။ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုခု ဂျာနယ်တစ်ခုခုမှာ ပါတာကြာနေပြီ။ သူရေးတာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ မှာရေးတာ ။ သူတို့ဂျာနယ်က မတ် ၁၄ မှ ထွက်လာတာ ။ )
– ဒီကဗျာကိုသုံးပြီး ဂျာနယ်ရောင်းကောင်းအောင်လုပ်လို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့မဟုတ် .
( ယုံကြည်နိုင်ဖွယ်မရှိ။ ရေးသူအမည်တောင် သေချာမသိခင်ကတည်းက ငမ်းငမ်းတက် ထည့်ရိုက်ပြီးမှ ဒီစကားမျိုးလာပြော။ သူတို့ page ကသတင်းတစ်ပုဒ်မှာ မသွဲ့သွဲ့ဝင်းကို မသွပ်သွပ်ဝင်းလို့ ရေးထား။ ဒီလိုအမှားမျိုးတွေနဲ့ ဂျာနယ်တစ်ခုကို ယုံကြည်ဖို့ အသင့်မဖြစ်သေး )
သူပြောသွားတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှာလဲ မေးတော့ အခုထွက်မယ့်ဂျာနယ်ကို စောင့်ကြည့်ပေါ့တဲ့။ စောင့်ကြည့်သေးတာပေါ့။ သူ့စကားအသွားအလာအရတော့ ဒီကဗျာကိုပဲ ဟိန်းနာမည်နဲ့ထပ်ဖော်ပြမယ့် အနေအထားပဲရှိ။
ဒါကို မလိုချင်ပါ။ သူတို့ လွန်ကျူးခဲ့တယ် မှားယွင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြေရှင်းတောင်းပန်ခြင်းမရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ကျေနပ်ပေးစရာအကြောင်းမရှိပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာ။
This entry was posted in ပစ်စာ, မြန်မာသတင်း, News and tagged ပြည်သူ့ဆန္ဒဂျာနယ်, မြန်မာသတင်းများ, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, မြန်မာသတင်း, Myanmar Article, Myanmar Update News, People Will Journal on March 15, 2013 by koshwehtoo.
← ၀က်မှေးရွာသူ သွဲ့သွဲ့ဝင်း ကျရူံးသူရဲ့ အောင်မြင်မှု →